Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata tebụl Scisor Standard China Standard Scissor ebuli Isiokwu Factory
A na -ejikarị tebụl ihe mkpị anọ ahụ na -ebufe ngwongwo site na ala nke mbụ ruo na nke abụọ. Ihe kpatara ụfọdụ ndị ahịa nwere oghere pere mpe na enweghị oghere zuru oke iji wụnye mbuli ụgbọ ibu ma ọ bụ mbupu ibu. Ị nwere ike họrọ tebụl ebuli isi anọ anọ kama mbuli ụgbọ ibu.
Ịdị elu ọrụ nke tebụl ebili isi atọ dị elu karịa okpokoro okpukpu okpukpu abụọ. Ọ nwere ike rute elu ikpo okwu nke 3000mm na ibu kachasị nwere ike iru 2000kg, nke doro anya na -eme ka ọrụ njikwa ihe ụfọdụ dị mma ma dịkwa mma.
A na -eji tebụl ihe ndozi ihe eji arụ ọrụ arụ ọrụ, ahịrị mgbakọ na ngwa ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Enwere ike ịhazi nha ikpo okwu, ikike ibu, ịdị elu n'elu ikpo okwu, wdg. Nhọrọ ngwa dị ka njikwa njikwa anya nwere ike ịnye ya.